Nyochaa Doogee Nova Y 100X | Gam akporosis
Anyị na-alọta ike na Nyocha banyere njedebe gam akporo na-atọ ụtọ. Dị ka ihe na-akpali dị ka nke a Nyocha zuru ezu nke Doogee Nova Y 100X, otu Quad Core na 1,3 Ghz na 1 Gb nke RAM, gam akporo 5-0 Lollipop, 5 ″ IPS HD ihuenyo na 2,5D OGS teknụzụ anyị nwere ike inweta maka ihe na-erughị 80 Euro. Ee ee, ị nụrụ nke ziri ezi, otu Android Lollipop si Doogee maka ihe na-erughị euro 80 gụnyere ụgwọ mbupu na ọnụahịa ikpeazụ nke ngwaahịa a.
Na vidiyo dị n'elu isiokwu a, anyị na-ekwu okwu banyere nkọwapụta ọrụaka niile nke a ihe omimi Doogee Nova Y 100X, a ọnụ na m nwere obi ụtọ nke na-anwale maka a di na nwunye nke izu dị ka m onwe mobile, na eziokwu bụ na ọ na-eju m anya site ya ezi ọrụ, kwụsie ike nke sistemụ arụmọrụ na ezigbo fluidity nke usoro.
1 Nkọwapụta teknụzụ nke Doogee Nova Y 100X
2 Ihe kacha mma nke Doogee Nova Y 100X
3 Ihe kacha njọ nke Doogee Nova Y 100X
Nkọwapụta teknụzụ nke Doogee Nova Y 100X
Nlereanya Nova Y 100X
Usoro njikwa 5.0 Lollipop Android
Ihuenyo 5 "IPS OGS nwere teknụzụ 2.5D, HD mkpebi 1280 x 720 pikselụ nwere njupụta nke 320 dpi na nchekwa Gorilla Glass.
Nhazi Mediatek MT6582 Quad isi na 1 3 Ghz
Ebe nchekwa RAM 1 Gb
Nchekwa Esịtidem Nchekwa 8 Gb gbasaa site na MicroSD ruo 32 GB.
Igwe n'ihu 5 Mpx na ikanam Flash gụnyere
Igwefoto na-aga n'ihu 8 Mpx na ikanam Flash
Njikọ SIM abụọ - 2G(850/900/1800 / 1900MHz)/ 3G(850/1900 / 2100MHz)/ 4G - WiFi - Bluetooth - GPS na GPS - FM Radio
Ihe ndị ọzọ Smart ogbugbu akara na smart edemede-elu atụmatụ
Akụkụ 141'2 x 70'2 x 7'9 mm
Ibu ibu 119 grams
Ahịa 76 Euro
Ihe kacha mma nke Doogee Nova Y 100X
Otu n'ime ihe anyị nwere ike ịkọwapụta banyere nke a Doogee Nova Y 100X, ma e wezụga nke ya ezigbo mma / ọnụahịa ruru nke na-emeworị ka ọ bụrụ ebe a na-atụ aro nke ukwuu ịmalite na ụwa gam akporo nwere ezigbo ọnụ na karịa asọmpi asọmpi, enweghị ike ịsị m; bụ na a nnukwu gam akporo ọnụ nwere a version nke Android 5.0 Lollipop nke ahụ na-eme ka ọ tụgharịa site na mmiri dị egwu site na ihe ngosi quad-core processor nke Mediatek bịanyere aka.
Ihe ọzọ ịkọwapụta banyere nke a Doogee Nova Y 100X, agbanyeghị na a na-ahụta ya dị ka ngwụcha ngwanrọ gam akporo, anyị nwere ike ịchọta ya na ya 8MP n'azụ igwefoto, Igwefoto azụ na ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ọkụ dị ala na-ahapụ ọtụtụ ihe a ga-achọ, n'èzí na n'ọnọdụ dị mma, eziokwu bụ na ọ na-ese foto nke ihe karịrị ezigbo mma.
N'aka nke ọzọ, Okwesiri igosiputa okwu nke ijikọta,, ebe ọ na-agụta ọnụahịa ọnụahịa anyị na-ekwu maka ya, enwere ekele maka inwe Njikọ 4G ma ọ bụ LTE Na mgbakwunye, kedu ka ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, nwee Wifi, bluetooth, FM Radio, Dual SIM na GPS na aGPS na eziokwu ahụ bụ na ọ na - arụ ọrụ nke ọma na - enweghị mkpa maka ụdị mmezi ma ọ bụ aghụghọ ọzọ.
Iji mechie akụkụ dị mma nke ngwanrọ gam akporo a dị egwu nke m ji n'aka na ọ ga-enwe nnabata dị ukwuu, anyị nwere ike igosipụta ohere ọ nwere nke ịgbasawanye nchekwa site na Kaadị MicroSD ruo 32 Gb ikike nchekwa kachasị.
Banyere batrị nke na-enweghị isi, batrị nke priori yiri ka agbanweela ya 2200 mAh, n'oge eziokwu bụ na e gosipụtara anyị a karịa zuru batrị ịkwaga a HD ihuenyo mkpebi na-enye anyị a nkezi obodo kwụụrụ nke ihe dị ka awa 24 jiri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa atọ na ọkara nke ihuenyo.
Ihe kacha njọ nke Doogee Nova Y 100X
Na akụkụ ndị na-adịghị mma anyị nwere ike ịkọwapụta nke a Doogee Nova Y 100X, ihe kacha mkpa ga-abụ ọnọdụ ọjọọ nke bọtịnụ olu na bọtịnụ Ike na ịkpọghe, ọnọdụ nke dị na mpụga n'akụkụ nke ọnụ, n'ihe banyere olu a na-agbakwasị ụkwụ na azụ nke ụlọ azụ nke ọnụ, ebe ọ na-esiri ike ịchọta bọtịnụ ziri ezi. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ ihe ndekọ dị mfe ekele maka mmejuputa njikwa ahụ, nke anyị nwere ike ịnweta site na ntọala ntọala nke ọnụ ma hazie ya ka anyị wee nwee ike ijikwa olu nke ọnụ site na ịmegharị mkpịsị aka abụọ site na ntanetị. Doogee Nova Y 100X.
Otu ihe a na - eme na bọtịnụ on / off, nke bụ otu ihe ahụ mkpọchi / mkpọchi bọtịnụ, nke mgbe ọ nọ n’elu ọnụ ya ka emechara. enweghi obi iru ala na nmekorita ya na yal, ọ bụ ezie na n'otu ụzọ ahụ na-eme na njikwa olu, site na njikwa ọgụgụ isi site na mmegharị, anyị ga-enwe ike hazie ya igbachi ọnụ na nanị abụọ taps na Home button na unlock kpọghee ekwt ya dị nnọọ abụọ enweta na Home button onwe ya ma ọ bụ, na nke a, na-na a abụọ tap ebe ọ bụla na ihuenyo.
Ezigbo igwefoto azụ
Ezigbo oke maka ama
Ọnọdụ ọjọọ nke bọtịnụ olu na bọtịnụ Ike
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nyochaa Doogee Nova Y 100X, Quad Core Lollipop maka ihe na-erughị 80 Euro
Ekwentị ahụ enweghị njikọ 4G.
Ndị agha na ndị nkwado a bụ:
Ndewo, ahụrụ m ozi ị nyere banyere ekwentị mana ọ bụrụ na ị nwere ike biputere ụfọdụ foto na selfies iji nwee ike ịhụ ogo ya na nnukwu kọmputa ọ ga-adị mma. Echiche kacha mma
Nicholas Yara dijo
Ndewo, achọrọ m ịma oge ole batrị ga-adịru maka ekwentị na kedu ka ọ si dị na Colombian peso
Zaghachi Nicolas Yara
Sony hiere ụzọ n ’nkọwapụta nke Xperia Z5